Ko MK-677 (Ibutamoren) inoshanda mushe KuMuscle Kuvaka? Kudzokorora
/Blog/garari/Ko MK-677 (Ibutamoren) inoshanda mushe KuMuscle Kuvaka? Kudzokorora
Posted on 09 / 29 / 2019 by 阿斯劳 akanyora garari.
MUTSVENE ndiye nyanzvi yekugadzira MK677 powder (Ibutamoren).
Imwe yemakuru mk 677 mabhenefiti inowedzerwa kukura kwemhasuru uye kupora. Sezvo mk 677 yekuwedzera inowedzera IGF-1 uye GH nhanho mushandisi anogona kuisa pahukuru hwakawanda nyore. Izvi zvakatsigirwa neruzivo uye nesainzi. Zvidzidzo zvakaitwa zvakaratidza kuwedzera kukuru kwemasisita mashoma kunyanya kune vanhu vane hosha yekukura kwehomoni uye varume vakuru kunyanya makore makumi matanhatu zvichikwira. Mazhinji mk 60 wongororo kubva kuvashandisi zvakare anoratidza kuti uyu mushonga une yakanaka yakanaka mhedzisiro pane mhasuru tishu chivakwa.
Mune ongororo yesainzi yakaitwa pavanhu vasere vanotsanya, Ibutamoren mk 677 akakwanisa kudzosera kuparara kwemhasuru uye kurasikirwa kweprotein. Chimwe chidzidzo chakaratidza kuti mushonga uyu wakabatsirawo varwere vakura vaive nemakwapa akavhunika vawedzere simba remhasuru nekuwana zvirinani.
Anenge wese anovaka muviri anoreurura kuti kumwe kukuvara kwakanonotsa sei kufambira mberi kwake nekuvharira kunze kwekurovedza muviri kwemazuva, kana kunyangwe mavhiki. Kana iwe uchiramba uchishandisa yakawanda yenguva yako mune yekurovedza muviri, kukuvara hakudzivisike. Zvakare, iko kukurumidza kuwedzera kwemhasuru kuwanda kunobva kune yako yakaoma yekudzidzira zvikamu, kunogona kuisa yakawanda kumanikidza kumatumbu ako kusanganisira mapfupa anotungamira kukuvara.
Vazhinji vashandisi vanobvuma kuti mk677 yakavabatsira kurumidza kurasikirwa kwemafuta. Mk 677 kurasikirwa kwemhedzisiro mhedzisiro yakanzi inoshamisa pamwe nekuti GH ndiyo yega hormone inogona kukubatsira kupisa ese epasi uye epasceral mafuta ichikugonesa kukudziridza yakaonda mhasuru. Nekuda kweizvozvo, Ibutamoren inogara ichiwedzerwa kune ekugadzirisa muviri zvirongwa.
Imwe mk 677 kubatsirwa ndeyekuti inomutsa ghrelin receptor uye inogona kukonzera nootropic mhedzisiro. Zvinoenderana neongororo yakatsvagiswa neNCBI inogona kubatsira kusimudzira mashandiro ehuropi nekukanganisa nzira mbiri zvisina kunangana. Maitiro aya anosanganisira kukurudzira IGF-1 iyo inobatsira mukusimudzira kuchengetedza ndangariro uye kugona kudzidza. Uye, kuburikidza nekusimudzira mhando uye huwandu hweREM yekurara. Kurara kwakakosha nekuti kunoitisa zvakakwana kugona kwekuziva.
Mk 677 inowedzera IGF-1, IGFBP-3, uye kukura kwemahormone muvana vane kushomeka kwekukura kwehomoni pasina kuchinja kuwanda kwecortisol, insulin prolactin, glucose, thyroxine (T4), thyrotropin kana triiodothyronine (T3).
Ibutamoren yakaratidza mhedzisiro yakafanana paGH-yakashomeka varume, asi glucose uye insulin yakawedzera, futi.
Kuve Ghrelin Mimetic iwe unofanirwa kutarisira kutora chikafu chakawanda uri pasi peIbutamoren. Kunyangwe izvi zvichibatsira kana kusagadzikana zvinoenderana nezvinangwa zvako, uchafanira kunzwisisa kuti ndeimwe yemhedzisiro isina kupokana mk 677 mhedzisiro.
Ibutamoren inoshanda zvikuru mukusimbisa hutachiona hwedu uye kugara zvakanaka. Kugona kwemuviri wako kurwisa uye kugara kure nekukanganisa kwemwaka uye kurwara kunovandudzika. Iwe unozotanga kurarama hupenyu hwakanakisa huzere nerunyararo rwepfungwa.
Cycle 1: Kuti uwane iwo akakwana MK 677 (Ibutamoren) poda kuwana, iwe unofanirwa kutanga ne10mg pamaawa makumi maviri nemana kwemavhiki ekutanga e24 ekushandisa usati wawedzera kune 11-20mg pamaawa makumi maviri nemana gare gare mukutenderedza iyo 25th vhiki. Izvi zvinogona kutorwa seyemvura, kana nemuromo kana ne capsule.
Cycle 2: Unogona zvakare kutanga ne15mg paawa makumi maviri nemana uye wedzera yako MK 24 kutenderera kureba kupfuura masvondo gumi nemaviri. Nekudaro, haufanire kunetseka nezvematambudziko neako pituitary gland kana mamwe mhedzisiro.
Cycle 3: Vazhinji vavaki vemuviri vanouya kubva-kutenderera opts yekuwedzera yavo MK 677 dosi kune 50mg pazuva uye chengetedza MK 677 kutenderera kureba kwemavhiki masere.
Cycle 4: Kana iwe uchida kuvaka mhasuru, vashandisi vanopa zano kutora iyo Ibutamoren muyero we30mg pamaawa makumi maviri nemana.
Cycle 5: Kana chinangwa chako chikuru chiri chekubvisa mafuta, saka vazhinji vashandisi vane ruzivo vanokurudzira kutora 20mg paawa makumi maviri nemana.
Cycle 6: Kana chako chikuru chinangwa kuporesa kukuvara, MK 677 muyero we10-20mg pazuva unokurudzirwa kwazvo.
Nhau dzakanaka ndedzekuti hauzodi PCT (Post Cycle Therapy) ye mk 677 sezvo isingakanganise chero mahormone.
Tsvagurudzo yedu nemishumo kubva kuvashandisi vane ruzivo zvinoratidza kuti 20mg kusvika 30mg ndiyo yakanyanya kunaka MK 677 dosage. Vamwe vashandisi vakataura kutora zvinopfuura 30mg yeibutamoren pazuva, asi izvi hazvina kupa mhinduro iri nani. MK 677 kutenderera kureba yakaratidza kuve yakakosha kupfuura iyo ibutamoren dosage.
Sezvo ibutamoren ichiri Investigational Nyowani Mushonga, haisati yatenderwa neDFA. Nekudaro, mk 677 yakave ichishandiswa kuyedzwa nevamwe vadzidzisi vemuviri munharaunda yekuvaka muviri avo vanobvuma kuti mushonga uyu wakachengeteka. Izvo zvakare zvakave zvakadzidzwa zvakanyanya nevasayendisiti vanobvumawo kuti mushonga unoshanda.
Ibutamoren achangobva kuve anozivikanwa zvisingaite munharaunda yekuvaka muviri. Chikonzero chikuru nei mk677 nutrobal iri kuiswa zvakanyanya mukuvaka mhasuru ndeye chinangwa chekusimudzira mazinga eGH. Wese munhu ari mukuvaka muviri anogara achitarisira kuve akaonda uye mukuru.
Sezvo Hormone Yekukura ichidhura kwazvo hapana imwe mhinduro-inovheneka yekuwedzera kukura kwehomoni, kunze kweNutrabol. Mk 677 iri nzira isingadhuri kana ichienzaniswa HGH (Hormon Yekukura Kwevanhu) uye inogona kunyatsoshanda kuwedzera munhu kukura mahormoni pamwero wakakura.
Izvo zvakakoshawo kuti iwe uzive kuti Nutrobal inogara yakarongedzwa ne SARM. Muenzaniso wakakwana mubatanidzwa weS23, MK-677, uye RAD140 (Testolone) powder.
Janssen I, Heymsfield SB, Wang Z, Ross R. Skeletal mhasuru uye kugoverwa mu468 varume nevakadzi vane makore 18-88 yr. J Appl Physiol. 2000; 89: 81-88
Adunsky A., Chandler J., Heyden N., Lutkiewicz J., Scott BB, Berd Y.,. . . Papanicolaou DA (2011). MK-0677 (ibutamoren mesylate) yekurapa varwere vanopora kubva muhudyu kutsemuka: multicenter, yakasarudzika, placebo-inodzorwa chikamu IIb kudzidza. Zvinyorwa zveGerontology uye Geriatrics, 53 (2), 183-189.
I10 Inonyanya Kufarirwa Anabolic Steroids Raws Material Iko kusanzwisisika kusanzwisisika mune anabolic steroid yenyika